IMDB: 6.8/10 2,420 votes
Beckett(2021) Beckett(2021) အညွှန်း**********************IMDb....7.5ဒီကားထဲကမင်းသား John David Washington ဟာ မင်းသားကြီး ဒန်ဇယ်ဝါရှင်တန်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့ ဒါရိုက်တာကြီးနိုလန်ရဲ့TENET မှာပွဲကြမ်းခဲ့တာ တော်တော်များများသိကြမှာပါ...အခု Netflix ကထွက်တဲ့ ဒီကားထဲမှာတော့ တခြားသူတွေကို ကယ်ဖို့နေနေသာသာ သူ့ကိုယ်သူတောင်မနည်းပြန်ကယ်နေရတဲ့ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကြားရောက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့....ဘတ်ကတ် နဲ့ ဧပရယ်တို့ဟာ ဂရိနိုင်ငံကိုအလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညနေ သူတို့နှစ်ယောက် ခရီးစဉ်အတွင်းယာဉ်မတော်တဆမှုကြုံရာကနေ ဇနီးဖြစ်သူ ဧပရယ်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကတ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရသွားတယ်...ဇနီးသည်သေဆုံးမှုကြောင့် သောကမငြိမ်းနိုင်သေးတဲ့ဘတ်ကတ်တစ်ယောက် ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်တဲ့ နေရာကိုသွားပြီး သူ့ဇနီးသည်ဖြစ်သူကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နူတ်ဆက်ဖို့သွားခဲ့ပါတယ်...အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ထူးဆန်းစွာ သူတို့ယာဉ်မတော်တဆမှုကို ကိုယ်တွယ်နေတဲ့ ရဲတွေကဘက်ကတ်ကို ပစ်သတ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်....နယ်မြေစိမ်းမှာ သူအားကိုးရာဖြစ်တဲ့ရဲတွေကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုယ်လိုက်သတ်တယ်ဆိုတော့ ဘက်ကတ်တစ်ယောက်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါတော့တယ်...သူ့ကိုရဲတွေက ဘာလို့နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားတာလဲ... သူလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား...ဒီရဲတွေရဲ့နောက်မှာ သီးခြားဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေများရှိနေမလဲ...သူကရော ဘယ်နေရာမှာ ဘာအမှားလုပ်ခဲ့မိလဲ? အခုလိုက်သတ်နေတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ ? ဘာကြောင့်လဲ ? အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုဘတ်ကတ်နဲ့အတူ ရင်တမမနဲ့ ဆက်လက်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။File Size : (1.9GB), (1GB), (380MB) Quality : WEB-DL 720p Format…mp4 Duration…01:48:00 Genre ...
IMDB: 7.5/10 12043 votes
Shershaah (2021) Shershaah 2021 --------------------------------- IMDB 9.0/10 User 3.9Kဒီနှစ်ထဲမှာ low budget နဲ့ဇာတ်ကားတွေချည်းမို့ ကားကောင်းတွေ နည်းခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအထဲ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ကြိုက်မိပါတယ်။ဗစ်ကရမ်ဆိုတဲ့ ငနဲက ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ရန်ဖြစ်ဖို့လည်း လက်မရွံ့ခဲ့။ အကြောက်တရားက မရှိခဲ့။ကျောင်းတွင်း ပြည်ထောင်စုနေ့၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့တွေမှာဆို ကျောင်းသားအားလုံးကို ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ မြင်ရပေမဲ့ ဗစ်ကရမ်ကတော့ အိန္ဒိယစ်စဝတ်စုံကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ဝတ်လာတတ်တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းက မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်က အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ စစ်သားကြီးဖြစ်ဖို့ပေါ့။သူကောလိပ်တက်စဉ်မှာတော့ အင်မတန်မှကို ချောမောလှပတဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အချစ်ရေးမှာရော သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်က ဘယ်လို အတားအဆီးဖြစ်လာမလဲ။အဲ့ဒါက ဗစ်ကရမ်ရဲ့အကြောင်းပါပဲ ။သူ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ နေမြေကတော့ အများသိတဲ့ စစ်သွေးကြွတို့ရဲ့ နယ်မြေ ကက်ရှ်မီးယားပါပဲ။ကက်ရှ်မီးယားကို သူစတင်ရောက်စဉ်မကြာမီမှာပဲ ဒေသခံတွေနဲ့ ရင်းနီးသွားတယ်။သတင်းပေးတွေရဲ့ သတင်းတွေအရ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဘယ်လိုဖြိုခွင်းမလဲဆိုတာကိုလည်း စစ်ကားကောင်းတစ်ကားလို ကြည့်ရမှာပါ။အချစ်လည်း ပါသလို၊ စစ်ရေးလည်း ပါတာမို့ ကြည့်ရတာ ကျေနပ်မိစေမှာပါ။ သူတို့တပ်ရင်းရဲ့ မြင်မြင်သမျှတွေဟာလည်း တကယ့်စစ်သားတွေလို စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကအစ သဘာဝကျလှပါတယ်။ဒီလို ကားကောင်းတစ်ကားကို မိတ်ဆွေတို့ အပန်းဖြေနိုင်ဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဪ မေ့လို့.. ရိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း သီချင်းလေးက ကောင်းလွန်းလို့ စာတန်းထိုးပေးထားပါတယ်ဗျ။ File size…1.45GB and 2.18GB Quality…720p AMZN Web ...
IMDB: 9.0/10 3.9k votes
300: Rise of an Empire (2014) 300: Rise of an Empire (2014) IMDb - 6.2/10_____Rotten - 44% #ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ဒီကားကတော့ 2006 ခုနှစ် တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ 300 ဇာတ်ကားရဲ့အဆက် အဖြစ် ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားက 300 လောက်သိပ်မကောင်းပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီကားမှာ စစ် ပွဲကောင်းကောင်းတွေ တွေ့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ကျွန်တော်အတွက်တော့ စိတ်ပျက်စရာဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ Themistokles ဆိုတဲ့ အေသင် မြို့က စစ်သူကြီး က ပထမဆုံးအကြိမ် Persian တွေ စစ်ချီလာကတည်းက ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ဖူးသလို၊ Xerxes ရဲ့ အဖေဖြစ်တဲ့ (အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက စစ်ချီလာတဲ့ Persian ဘုရင်) Darius ကို ပါ မြှားနဲ့ပစ်ခွင်းပြီး သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတုန်းက ဘုရင့်သားတော် Xerxes ကိုတော့ မသတ်ပဲ လွှတ်ပေးမိရာကနေ Xerxes က နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပြီး စစ်ချီလာတာဖြစ်ပါတယ်။၃၀၀ မှာတုန်းက Sparta ကို Messenger ...
IMDB: 6.2/10 276,816 votes
300 (2006) 300 (2006)IMDb - 7.6/10_____Rotten - 61%ဒီဇာတ်ကားက တကယ့်အဖြစ်အပျက်ရာဇဝင်ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ။ဇာတ်ကားရဲ့ အသက်ကတော့ စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် Graphic Effect တွေပါ။ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ တကယ်အသက်ဝင်ပြီး မာန်ပါလှပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းဆိုတာထက် သမိုင်းက တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။***300 (သို့မဟုတ်) Battle of Thermopylae***ဘီစီ ၄၈၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ပါရှားဘုရင် ဇပ်ဇီး(စ်) (Xerxes) သည် ဂရိပြည်အား တိုက်ခိုက် ရန်အတွက် စစ်သည် နှစ်သိန်း ၊ စစ်သဘောၤတထောင်မျှ ပါဝင်သည့် ဧရာမ တပ် ကြီးနှင့် ချီ၍ လာသည်။ ထိုစဉ်က ဂရိတို့သည် (City state ) မြို့တမြို့ တနိုင်ငံ စံနစ်ဖြင့် သီးခြားစီ ရပ်တည်နေထိုင်လျက် ရှိကြသည်။ သို့သော် တမျိုးနွယ်လုံး၏ ရန်သူ ပါရှန်တို့ စစ် ချီလာပြီ ...
IMDB: 7.6/10 722,929 votes
Big Hero6(2014) Big Hero6(2014) IMDb - 7.8/10______Rotten - 89% Won 1 Oscar. Another 16 wins & 58 nominationsWalt Disney Animation ရဲ့ နောက်ထပ် လူကြိုက်များလှတဲ့ animation ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ပေးထားတဲ့ Message တွေကောင်းမွန်လှပပါတယ်။ Baymax ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမှုလေးတွေနဲ့ ပုံစံတွေကို သဘောကျမိမှာ အမှန်ဖြစ်ပြီး Baymax ရဲ့ လှုပ်ရှားပြုမှုပုံတွေကို ပင်ဂွင်းပေါက်စလေးတွေရဲ့ အပြုအမှုကို ပုံစံတူယူပြီး ဖန်တီးထားတာပါ။ Walt Disney နဲ့အတူ Marvel Entertainment ကပါ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက် အစောပိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့ Walt Disney ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ မတူကွာခြားလို့နေပါတယ်။ IMDB Ratings: 7.8/10 ရရှိထားပြီး ကြည့်ဖို့လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါပဲ။ File size…(1.4 GB) / (700 MB) Quality…BluRay 1080p / 720p Format…mp4 Duration….01:48:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Thit San Khant Translated by ...
IMDB: 7.8/10 397,337 votes